Sida loo sameeyo liis caafimaad leh usbuuca oo dhan | Ragga Stylish
Xaqiiqdii bilaw inaad sameyso cunto iyadoo kuxiran hadafka aad dajisay. Waxaa jira dad si fudud u doonaya inay si wanaagsan wax u cunaan sababtoo ah waxay leeyihiin xoogaa dhaqamo cunno yar yar ah. Ogaanshaha sida loogu daro dhammaan cuntooyinka ka caawiya dhammaan nafaqooyinka jirku u baahan yahay waxay noqon kartaa hawl xoogaa adag. Sidaa darteed, halkan waxaan ku baran doonnaa sida loo sameeyo menu caafimaad leh usbuuca oo dhan.
Haddii aad rabto inaad ogaato talooyinka ugu fiican ee ku saabsan sida loo sameeyo liis caafimaad leh usbuuca oo dhan, kani waa boostadaada.
1 Dheelitirka tamarta iyo nafaqeeyayaalka yar yar
2 Sida loo sameeyo menu caafimaad leh usbuuca oo dhan: faa'iidooyinka
3 Cuntooyinka lagu daro
4 Sida loo sameeyo menu caafimaad leh usbuuca oo dhan: tallaabooyinka la raacayo
Dheelitirka tamarta iyo nafaqeeyayaalka yar yar
Markii aan bilawnay inaan sameyno menu caafimaad leh, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan tixgalino waa isku dheelitirka tamarta. Faahfaahinta liistada waa inaysan ka koobnaan oo keliya cuntooyinka dhabta ah iyo kuwa caafimaadka qaba, laakiin waa inay lahaadaan isku dheelitirnaan tamar marka loo eego yoolka. Haddii hadafkeenu yahay inaan kasbano murqaha ama aan lumino dufanka, waa inaan ku dheelitirnaa isku dheelitirka tamarta hal dhinac ama mid kale.. Taasi waa, haddii hadafkeenu yahay inaan helno cufnaanta murqaha waxaan u baahanahay cunnadeenna si aan u helno tiro kalooriyeyaal ah oo ka badan inta aan ku bixinno maalinteenna maanta. Dhinaca kale, haddii ujeeddada ugu weyni tahay baruurta oo dhinta, waxaan u baahan doonnaa liis naga caawinaya inaan xakameyno oo naaqusno kalooriyada aan cunno.
Waxaa jira dad badan oo markay bilaabaan raadinta sida loo sameeyo menu caafimaad leh usbuuca oo dhan, bilaabaan inay ka walwalaan fitamiinnada iyo macdanaha ay tahay inay cunaan maalin kasta. In kasta oo tani ay tahay tilmaam aad muhiim u ah, haddana ma ahan mid shuruud ku xiran. Tan kama dhahayo soo bandhigida cunnooyinka hodanka ku ah fitamiinnada iyo macdanaha inaysan daruuri ahayn. Waxa aad rabto inaad sheegto waa nafaqeeyayaalka yar yar (karbohaydraytyada, borotiinnada iyo dufanka) iyagu waa aasaaska meeniska caafimaadka qaba.
Markaad dooratid isku dheelitirka tamarta ee ku saleysan hadafkaaga, waa inaad ogaataa qaybinta nafaqeeyayaalka yar yar si aad u diyaariso liiskaan. Maaddadan nafaqada leh ayaa sidoo kale wax laga beddelay iyadoo lagu saleynayo yoolkeenna. Caadi ahaan, haddii aan rabno inaan bilowno cunno lumisa dufanka, waxaan adeegsan doonnaa cunto xoogaa ka hooseysa kaarbohaydraytyada. Waxaan sidoo kale u baahan doonnaa xoogaa ka badan qaadashada borotiinka haddii aan dooneyno inaan helno murqaha. Markaan dooranay waa labada arimood ee ugu horeeya ee xisaabta lagu darsan doono, waxaan daryeeleynaa inaan dhahno miro iyo khudrad nagu filan oo aan ku dari doono cuntada si aan ugu darno inta soo hartay ee nafaqeeyayaalka yar yar ee loo yaqaan fitamiinada iyo macdanta.
Sida loo sameeyo menu caafimaad leh usbuuca oo dhan: faa'iidooyinka
Xaqiiqdii in kabadan hal jeer ayaa kahadashay sheekada caadiga ah ee gurigaaga kusaabsan waxa aan cuno maanta. Hooyooyinku badanaa waxay weydiistaan ​​qoyska intiisa kale wixii la karinayo. Jawaabaha ugu badan ee soo noqnoqda waa: Ma ogi, dan kama lihi. Dhibaatada tan ayaa ah maalinba maalinta ka dambeysa fikradaha ku saabsan in menu laga dhigo dhammaadna waxay ku dambeeyaan cunista cunnooyinka qashinka ah. Sidaa darteed, habka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo inaad ka fikirto waxa aad cunayso waa inaad barato sida loo sameeyo menu caafimaad leh usbuuca oo dhan.
Waxaad u malayn kartaa inay xoogaa ka adag tahay laakiin waxay leedahay faa'iidooyin badan. Waxa ugu horeeya ayaa ah Lacag ayaad keydin doontaa maadaama aad ogtahay waxa ay tahay inaad tagto si aad uga iibsato supermarket-ka oo aad u yareyso kharashyada degdegga ah ee alaabada in aadan inta badan iibsan ama aysan ku jirin liiska. Waxaad sidoo kale badbaadin doontaa waqti maadaama aad diyaar u noqon karto cuntadaada waqti hore oo si fudud u dhalaalaya una kululeynaya. Sidoo kale waqti kuma lumin doontid inaad ka fikirto waxa ay karintaani leedahay. Ugu dambeyntii, waxaad gacan ka geysan doontaa hagaajinta cuntadaada. Waxaan ka hadlaynaa diyaarinta liis caafimaad qaba.
Cuntooyinka lagu daro
Si cunnadu isu dheellitiran tahay, waa inaan gelinno karbohaydraytyada maalin kasta, iyadoo la doorbidayo nooc nooc oo badar ah, miro qaar, caano dufan yar, hilib cad iyo kalluun, iyo saliid saytuun ah oo bikro ah oo dheeri ah. Mararka qaarkood ama dhowr maalmood usbuucii waxaan ku dari karnaa hilib casaan ah ama xoogaa warshadaysan ama soosay ah. Ugu dambeyntiina, in la soo bandhigo wax naga caawinaya inaan ku raaxeysano daqiiqado waxaan dhigan karnaa dubo, subag ama macmacaan. Isticmaalka dhexdhexaadka ah ee biirka ama khamriga ayaa lagula talinayaa dadka waaweyn.
Abuuritaanka menu-ka waa mid xiiso leh in la isticmaalo shaashad kaa caawinaysa inaad dhigatid dhammaan cuntooyinka usbuuca oo dhan. Ha iloobin inaad ugu yaraan wax dhigayso inta udhaxeysa 3-4 jeer oo hilib iyo kalluun ah, 2 jeer oo digir ah, 2 jeer oo bariis ah iyo 2 fal-dambiyeed oo baastada ah. Sidan ayaan ugu dhowaaneynaa inaan ku buuxino shaxanka qaab guud. Haddii aad waxoogaa dhimman leedahay waxaad ka buuxin kartaa ukun, maraq ama waxaad uga tagi kartaa farqiga si bilaash ah si aad uga faa'iideysato oo aad wax u cuntid maalin ka fog gurigaaga. Tan dambe ayaa ah mid aan lagula talin karin haddii aan u nugul nahay inaan ku guul darreysano cuntadeena. Waana inaan bilaabi karno inaan dhahno cunnadii waa la waayey oo amarka maalmuhu wuu is beddelaa oo aakhirka waan u hoggaansami weynaa.
Waxaan horeyba u haysannay waxa ugu muhiimsan, oo ah qaybinta noocyada kala duwan ee suxuunta. Aynu aragno tallaabooyinka la raacayo.
Sida loo sameeyo menu caafimaad leh usbuuca oo dhan: tallaabooyinka la raacayo
Xaaladdan awgeed waxaad u baahan tahay talobixinta iyo ra'yiga qoyskaaga. Waa inaad fariisataa oo aad aragtaa qof walba wuxuu doonayo inuu cuno iyo cunnooyinka uusan jeclayn. Cunnooyinka waxaa lagu samayn karaa min misir la kariyey, hilib la dubay, hilib lo'aad oo leh khudradda, digaagga liinta, makarooniga bolognese, khudradda lasagna, kalluunka duban, bariiska Kuba, risotto likaha, omelette Spanish, baradhada, ukunta cufan, iwm.
Fikradda ayaa ah in la arko dhammaan suxuunta qof walba jecel yahay oo la isku daro cuntada sida loo sameeyo menu ka duwan intii suurtagal ah. Haa dhab ahaantii waxaad sameyn kartaa raashin kugu filan oo soconaya dhowr toddobaad, xitaa way ka xiiso badnaan kartaa. Waxaa jira dad u arkaa wax soo noqnoqda inay cunaan wax isku mid ah toddobaad kasta. Sidaa darteed, haddii aan ku guuleysanno taas waxaa jiray xulashoo qado iyo casho oo nagu filan oo aan ku helno noocyo badan, waxaan ku yeelan doonnaa natiijooyin wanaagsan mustaqbalka fog. Waa inaan ka fikirnaa hadafkeenna ah inaan raacno liis caafimaad qaba inuu noqdo mid muddo dheer soconaya. Waa wax ay tahay inaan u ilaalino sidii hal caado oo badan oo nolosha ah.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkan aad ku baran karto sida loo sameeyo liis caafimaad leh usbuuca oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Sida loo sameeyo menu caafimaad leh usbuuca oo dhan